Ubomi buyinto engaqhelekanga 2 ngoku iyafumaneka kwiLinux kunye neMacOS | Ubunlog
Ayiloxesha lokuqala lokuba bayenzile kwaye ayizukuba yeyokugqibela: I-Feral Interactive ibuyile kwizibuko lomdlalo oza kubakho kwiLinux nakwi-macOS. Ngeli thuba, isihloko esikhethiweyo besikhona Ubomi buyinto engaqhelekanga 2, Iphehlelelwe ngoSeptemba 2018 kwiWindows, i-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One.
Ukucacisa ngakumbi, luthotho, sinokuthi uBomi buyinto engaqhelekanga 2 lifana nexesha lesibini lalo. Ngoku, zonke iziqendu ezihlanu ziyafumaneka ngoku esinokuyithenga kunye okanye ngokwahlukeneyo. Ixabiso liyi- € 7.99 / isiqendu okanye i- € 39.95 ukuba sithenga yonke ipakethi, ukuba nje sikhetha ukhetho esisithenjiswa nguSteam.
Ubomi Bumangalisa 2 iyafumaneka kwiStam nakwiFeral Store
Emva kwesiganeko esibuhlungu, abazalwana uSean noDaniel Diaz bayaqhubeka bebaleka besoyika amapolisa. Njengokuba oku kwakungonelanga, kuyacaca ukuba uDaniel ngoku unokuhambisa izinto ngengqondo yakhe, ke aba bazalwana babini banquma ukuya eMexico. Kwidolophu katata wakhe, ePuerto Lobos, kufanelekile ukuba bakhuselekile.
Ezona mfuno zisezantsi zokudlala kwiLinux zezi:
SW: Ubuntu 18.04 64-isuntswana.
Inkqubo: 3.4GHz Intel Core i3-4130 (kucetyiswa i5-6500).
Imemori: I-4GB ye-RAM (kucetyiswa i-8GB).
Imizobo: I-NVIDIA GeForce GTX 680 2GB okanye i-AMD Radeon R9 380 4GB (i-NVIDIA GeForce GTX 970 4GB okanye i-AMD Radeon RX 470 4GB iyacetyiswa)
Ukugcina: I-42 GB yendawo ekhoyo
Ubomi bu-Strange 2 buyafumaneka ukusukela namhlanje nge Steam kusuka esi sixhobo okanye iVenkile yeFeral ukusuka le enye. Njengoko ubona, uSteam usinika ezinye iindlela, ezinje ngeephakeji ezongezelelweyo (isilwanyana sasekhaya se- € 1.99) kunye nokubanakho kokuthenga iziqendu ngokwahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Ubomi bu-Strange 2 ngoku buyafumaneka kwiLinux kunye neMacOS enkosi kwiFeral Interactive